यूएईबाट ल्याइएका गोरेका सहयोगी बेनुलाई मोरङ लाने तयारी
काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका चूडामणि उप्रेती उर्फ गोरेका सहयोगी वेनु श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टर ...
काठमाडौ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्माण गरेको शङ्खमूल पार्क ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सन् २०१४ मा सम्झौता भएको उक्त पार्क निर्माणको काम स ...
थाइल्याण्ड सिरीफोट। अपांगहरुको साझा मुद्दालाई बोकेर सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका सामाजिक अभियन्ता निलकण्ठ पौडेलको पर्यटनमा अपांगताको पहुँच नामक वृत्तचित्र थाइल्याण्डमा प्रदर्शन गरिएको ...
नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरिया र एनआरएनए दक्षिण कोरियाको संयुक्त भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
सउल, दक्षिण कोरिया नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरिया र एनआरएनए दक्षिण कोरियाको संयुक्त भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरिया र एनआरएनए दक्षिण कोरियाको संयुक्त आयोज ...
मृत्यु भइसकेकाको मुटु प्रत्यारोपण गर्ने डा. धिताल अवार्डका लागि मनोनयनमा
काठमाडौं । नेपाली एक डाक्टर अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित अवार्डको मनोनयनमा परेका छन् । नेपाली डाक्टर कुमुद धिताल अष्ट्रेलियाको ‘प्राइड अफ अष्ट्रेलिया’ नामक अवार्डको मनोनयनमा परेका हुन् ...
जापान । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरुको रोजाइमा पर्ने देशमध्ये जापान पनि एक हो । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने पनि उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीहरु जाने दे ...
जापानका उन्नत कृषि प्रणाली र बिउ नेपाल भित्र्याउन पहल
जापान । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को बिशेष सहयोग मा जापानमा ‘नेपालको कृषि प्रवर्द्धनमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको भूमिका’ बिषय मा छलफल तथा अन्तरक्रिर्या कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ...
२८ हजार ६ सय डलर फिर्ता नरेश अष्ट्रेलियामा पुरस्कृत
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेका एक नेपालीले भेट्टाएको रकम र पासपोर्ट फिर्ता गरेर नेपालीहरुकै इज्जत बढाएका छन् । उनको गरेको प्रसंसायोग्य कामका कारण उनलाई पुरस्कृत समेत गरिएको छ । उनले ट ...
काठमाडौं । नेपाली राजदुतावास टोकियो र एनआरएनए जापानको पहलमा सञ्चालन हुँदै आएको टोकियो बससँगको सम्झौता पुनः एक वर्षका लागि थप भएको छ । टोकियोको मेगुरो बस स्टेशन बाट नेपाली राजदुतावास हुँदै चल्न ...
काठमाडौं । शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडानमा खटिएका एक नेपाली सैनिक जवान गोली लागेर घाइते भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा दक्षिण सुडानमा तैनाथ श्री सिद्धिबक्स गण चौथो डफ्फामा कार्य ...
जापान । नेपाल विद्यार्थी संघ जापान शाखाले ४ शाखा अध्यक्ष साहित ३७ जनाको कार्यसमिति गठन गरेको छ। जापान शाखा अध्‍यक्ष दिपक अधिकारीले आज जापान शाखाको विस्तार गरेका हुन् । यसअघि नेविसंघका अध्यक्ष नैनस ...
काठमाडौं । नेपालीहरु मिलेर अमेरिकामा बैंक स्थापना गरेका छन् । बैंकको स्थापनासँगै नेपाली विदेशमा दुःख मात्रै गर्न जान्छन् भन्ने आमबुझाई झण्डै गलत जस्तै भएको छ । नेपालीहरुले एभेरेस्ट फेडरल क्रेडि ...
मिस्टर मोडल अफ द वर्ल्डको उपाधि दिक्पालको पोल्टामा
काठमाडौं । मिस्टर मोडल अफ द वर्ल्ड– २०१८ को उपाधि नेपाली मोडल दिक्पाल कार्कीले हात पारेका छन् । म्यानमारमा सम्पन्न कार्यक्रममा ९ प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै कार्कीले मिस्टर मोडल अफ द वर ...
काठमाडौं । नेपालमा रहेका गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासका लागि अमेरिकी प्रोफेसर डा. टड ह्वाइटले छात्रवृत्तिको घोषणा गरेका छन्। उनी अमेरिकाको न्यु मेक्सिकोस्थित युनिभर्सिट ...
दुबई । गैरआवासीय नेपाली संघको मध्यपूर्व क्षेत्रिय सम्मेलन दुबईमा सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षीत र व्यवस्थित बनाउन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले सरकारले लागु ...
चितवनमा जन्मिएका प्रविण गुरुङ अहिले कतारका सफल व्यवसायी बनेका छन् । १४ वर्षसम्म गार्खा पल्टनमा काम गरेका उनी कतारका ठूला व्यवसायीमध्येमा पर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांश नेपालीहरु ...
‘बाँध माया’लेको प्रिमियर अष्ट्रेलियामा
काठमाडौं । चलचित्र ‘बाँध मायाले’को प्रिमियर अष्ट्रेलियामा सम्पन्न भएको छ । अगष्ट १८ तारिखमा अष्ट्रेलियाको इभेन्ट सिनेमा वरउडमा प्रिमियर आयोजना गरिएको हो । चलचित्रको यो शोमा नायक आर ...
रासस २०७५ साउन २४ गते
काठमाडौँ । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ प्रबर्धनका लागि बेलायतको वेल्सस्थित ब्ल्याक माउण्टेनमा हाइकिङ (लामो दूरीको पैदलयात्रा) आयोजना गरिएको छ । ‘हाइक फर नेपाल’ ले संय ...
जापान नेविसंघको अध्यक्षमा अधिकारी
२०७५ साउन २१ गते
जापान । नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले दीपक अधिकारीलाई जापनको अध्यक्षमा मनोनित गरेको छ । नेविसंघको विधान भाग ३ को धारा ६ बोमोजिम अधिकारीलाई जिम्बेवारि दीइएको नेव ...
काठमाडौं छिमेकी राष्ट्र भारतमा आरक्षणको नाममा भइरहेको आन्दोलनले हिंसात्मक रुपम लिएको छ । भारतको महाराष्ट्रमा मराठा समुदायले आफूहरुलाई सरकारी जागिर र शिक्षामा १६ प्रतिशत आरक्षणको मा ...
एदालाई अमेरिकामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रथम पुरस्कार
काठमाडौं । नेपाली एक छात्राले अमेरिकामा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ विधामा पहिलो पुरस्कार हात पारेकी छिन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको इमाजिन कप– २०१८ अन्तर्गत उनले ‘आर ...
केसीको नाममा घृर्णित राजनीति नगर्न प्रवासी नेपाली मंच अमेरिकाको चेतावनी
काठमाडौं। अनशनरत डा.गोविन्द्र केसीको नाममा कोही कसैले घृर्णित राजनीति नगर्न प्रवासी नेपाली मंच अमेरिकाले आग्रह गरेको छ । प्रवासी नेपाली मंच अमेरिका महासचिब राधाकृष्ण देउजाद्धारा हस्ताक्षरि ...
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्दै एनआरएन कतार
काठमाडौं । गैरआवसीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारले एक दिने स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । संस्थाको सुरक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि समितिको सक्रियतामा दोहाको अद्यौगिक क्षेत्र स ...
फरार सूचीमा रहेका राजा १० किलो सुनसहित भारतमा पक्राउ
काठमाडौं । हुण्डी कारोबारका फरार अभियुक्त विरगञ्जका सुन व्यापारी सन्तोष जैनका छोरा सौरभ जैन उर्फ राजा १० किलो सुनसहित पक्राउ परेका छन्। भारतको सिलिगुडीबाट जैन शनिबार पक्राउ परेको भारतीय ...
थाइल्याण्डको गुफामा फसेका साना फुटबल खेलाडीहरुको उद्धारमा खटिएका एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं । थाइल्याण्डको एक गुफामा फसेका १२ जना बालक र उनीहरुको फुटबल प्रशिक्षकको उद्धारमा खटिएका एक उद्धारकर्मीको मृत्यु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार ३८ वर्षीय समन कुननको ...
काठमाडौं । शक्ति समूहकी संस्थापक सदस्य सुनिता दनुवार अमेरिकामा ‘ट्राफिकिङ इनपर्सन हिरो–२०१८’ अवार्डबाट सम्मानित भएकी छन् । दनुवारलाई अमेरिकी सरकारले मानव बेचबिखन र आधुनिक दास ...
मानव तस्कर र साइबर अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाउँदैनन् : आईजीपी खनाल
न्यूयोर्क । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले नेपालमा पहिला जस्तो सुरक्षाको दृष्टिले भयभित हुनु पर्ने अवस्था नरहेको वताएका छन् । अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका आईजीपी खनालले डिसी महानगर क् ...
आफ्नै साथीले रडले हान्दा मलेसियामा नेपाली युवकको मृत्यु
काठमाडौं । रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका पर्वतका एक युवाको नेपालीकै कुटपिटबाट मृत्यु भएको छ । पर्वतको मोदी गाउँपालिका–५, बाजुङ, धमिलपानी गाउँका २२ वर्षीय किशोर केसी (नसिब) को साथीभ ...
काठमाडौं । भिक्टोरियास्थित बालारात करी हाउसमा कार्यरत एक नेपाली सेफ ग्राहकको हत्यामा दोषी ठहर भएका छन् । ५१ वर्षीय सेफ हरिप्रसाद ढकालमािथ पाकिस्तानी मूलका आईटी क्षेत्रका कामदार अब्दुल्लाह सिद्द ...
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी अन्तरगर्त अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज मलेसियाको दोश्रो अधिवेशनले वीरेन्द्र नेगीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमितीको चयन गरेको छ । आइतबार क्वालालम्पुरमा भएको अधिवेशनले समा ...
नेपाली भवन बनाउन अमेरिकामा सप्ताह, ६ करोड उठ्यो
काठमाडौं । अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा नेपालीको साझा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि आर्थिक संकलन गर्ने उद्देश्यले वैशाख १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म भएको सप्ताहमा करीब छ करोड संकलन भएको छ । सप्ताह वाचन प्रवीण ग ...
बेलायतको काउन्सिलरमा तीन नेपाली
काठमाडौं । बेलायतमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा नेपाली मूलका ३ व्यक्ति काउन्सिलरमा विजयी भएका छन् । नेपाली मूलका विष्णु गुरुङ, चित्र राना र लक्ष गुरुङ काउन्सिलरमा विजयी भएका हुन् । काउन्सिलरमा जित निकाल्न ...
काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाली आप्रवासीलाई प्रदान गरिँदै आएको अध्यागमन सम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस’ (टीपीएस) को सुविधालाई बिहीबार खारेज गरेको छ ...
काठमाडौं । सत्य तथ्य समाचार छिटो भन्दा छिटो आम जनतामाझ पुर्याउनु पत्रकारको दायित्व नै हो । त्यसैले पनि पत्रकारहरु छिटो भन्दा छिटो समाचार प्रसारण गर्न खोजिरहेकै हुन्छन् । त्यसैले पनि पछिल्लो समय सबैभन् ...
अस्ट्रेलियामा नेपाली महोत्सव
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको उत्तरी डार्विन सहरमा पहिलोपटक नेपाल महोत्सव भएको छ । नेपाली नयाँ वर्ष २०७५ को अवसर समेत पारेर महोत्सव आयोजना गरिएको हो । महोत्सवमा सहभागी हुन संघीय राजधानी क्यानबेराबाट अस्ट्र ...
अफ्रिकामा अलपत्र ६ नेपालीको उद्धार
काठमाडौं । छ महिनादेखि अफ्रिको टोगोमा अलपत्र पारेका ६ जना नेपालीको उद्दार भएको छ । दलालले अमेरिका पठाउँछु भनेर अफ्रिको टोगोमा पु¥याएर अलपत्र पारेका उनीहरुको उद्दार भएको हो । उद्धार गरिएका महेश्वर ...
दक्षिण कोरियाका एकता मन्त्री (दायाँ) र उत्तर कोरियाका शान्तिपूर्ण पुनःएकता समितिका अध्यक्ष। काठमाडौं । उत्तर कोरियाले अन्तरकोरिया उच्चस्तरीय वार्ता अर्को हप्ता गर्न शनिबार गर्न सहमति जनाएको छ। अ ...
काठमाडौं । छिट्टै पैसा कमाउने लोभमा तस्करले अमेरिका पुर्‍याएका नेपालका दुई पुराना मूर्ति नेपाल फिर्ता ल्याइने भएको छ । मूर्ति नेपाल फिर्ता गर्ने सहमतिमा न्यूयोर्कस्थित कन्सुल जनरल मधुकुमार मरासिनी ...
काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा रहेको नेपाली राजदूतावासले जग्गा खरिद गरेको छ । अष्ट्रेलियामा रहेका विदेशी कूटनैतिक नियोगहरुका लागि त्यहाँको सरकारले छुट्याएका सीमित जमिनमध्ये इ’ःबििभथ स्थित ब्लक नं. ३२, ...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट प्रवासी संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकामा बिवाद भएपछि पार्टीले अधिवेसन नगर्न निर्देशन दिएको छ । कांग्रेसले अर्को जानकारी नहुन्जेल अधिबेसनसँग सम्बन्धित कुनै गतिबिधि ...
काठमाडौं । रेमिट्यान्सले चलेको हाम्रो देशको सरकार रेमिट्यान्स भित्र्याउनेहरुलाई नै वास्ता गर्दैन । गरिव नेपाली जनताका छोरा छोरीले खाडी मुलुकको ५० डिग्री भन्दा बढि चर्को घाममा श्रमसँग रगत र पसिना साटिर ...
ऐ मेरो हजुर–२ अमेरिकामा
काठमाडौं । अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका नायिका तथा निर्देशक झरना थापा तथा निर्माता सुनिलकुमार थापाको ‘ए मेरो हजुर–२’ डिसीमा प्रदर्शन हुने भएको छ । युरोपका विभिन्न देशहरुमा ‘ए मेरो ह ...
बेलायती सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेल बने स्याङ्जाका खाम्चा
काठमाडौं । बेलायती सेनामा कार्यरत एक नेपाली उच्च अधिकृतमा पदोन्नति भएका छन् । स्याङ्जा शीरकोटका टोल खाम्चा मगर बेलायती सेनाको उच्च छैटौं वरीयताको लेफ्टिनेन्ट कर्णेल बन्न सफल भएका हुन् । ५० वर्षीय खाम् ...
कुवेतमामा नेपाली पञ्चे बाजा र गुन्द्रुक
काठमाडौं । कुवेतमा ‘एशियन बजार २०१८’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कुवेतको व्यापारिक संस्था सीर्इर्इ नेटवर्क र एशियाली देशका राजदूतावास एवं महाबाणिज्य दूतावासहरूको संयुक्त अयोजनामा पाल्म बिच ...
अमेरिकामा १ नेपालीको हत्या
काठमाडौं । अमेरिकामा एक नेपालीको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको छ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यको स्टोरमा काम गर्दै आएका ३५ वर्षीय मनिष पाण्डेको शनिबार राति बन्दुकधारीले आक्रमण गरी हत्या गरेका हुन् । टेक्सा ...
क्यालिफोर्नीयामा पनि मनाइयो पृथ्वी जयन्ती
काठमाडौं । अमेरिकाको क्यालिफोर्नीयामा पनि पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको छ । नेपालमा सरकारले सार्वजनिक विदा नै दिएर पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै आएकोमा यस वर्ष लामो समयदेखि क्यालिफोर्नीयाको बर ...
पाकिस्तानलाई दिंदै आएका सैन्य सहयोग रोक्ने अमेरिकाको घोषणा
काठमाडौं : अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिने सबै प्रकारका सैन्य सहयोग रोक्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार पाकिस्तान आतंकवाद अन्त्य गर्न असफल भएकाले यस्तो घोषणा गरिएको हो । अमेरिकी विदेश विभा ...
ट्रम्पलाई किमको चेतावनी
काठमाडौं : विश्व नै नयाँ वर्षमा झुमिरहेका बेला उत्तरको कोरियाली शासक किम जोङ उनले अमेरिकालाई चेतावनीयुक्त सन्देश दिएका छन् । किमले आफूले चाहे जुनसुकै बेला अमेरिकामाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्ने ...
मूल्यबृद्धिको विरोधमा उत्रिदा २ को मृत्यु, दर्जनौं घाइते
काठमाडौं : इरानमा भएको सरकार विरोधी आन्दोलनमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनो घाइते भएका छन् । कयौंलाई त पक्राउ समेत गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सरकारले मुल्यवृद्धि गरेपछि ...
चीन रुसप्रति ट्रम्पको आक्रोश
काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सोमबार राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि सोमबार पहिलो पटक आफ्नो प्रशासनको सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गर्नुभएको ...